Satria Coffee Plantation, Bali, Indonesia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fambolena kafe Satria
Fambolena kafe Satria any Bali
Topimaso momba ny fambolena kafe Satria
Fambolena kafe Fambolena kafe Satria miorina amin'ny 17 km eo ho eo miala an'i Ubud mankany avaratry ity tanàna ity. Iray amin'ireo toeram-pambolena kafe Baliana izy io. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fambolena voankazo, zava-manitra ary kakaô. Ny fahazoan'ny mpizahatany mampiavaka azy dia mampiavaka azy amin'ny toeram-pambolena maro hafa mitovy amin'ilay nosy.
Eto ianao dia afaka mahita zavamaniry maro eo an-toerana ary manaraka ny dingana rehetra amin'ny fanaovana kafe. Eo koa ny fanandramana zava-pisotro isan-karazany ary amidy ny tsaramaso kafe.
I Satria dia toeram-pambolena fianakaviana kely iray izay manodidina ny halavirana mitovy amin'i Ubud sy ny farihin'i Batur. Noho ny toerana misy azy, ny tompony, ankoatry ny fambolena kafe, zava-manitra ary kakaô, dia afaka mampiseho ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny mpizahatany ihany koa. Ny fitsangatsanganana manodidina ny faritany sy ny fividianana kafe ao amin'ny magazay dia misy mpitsidika. Ny tompon'andraikitra sy ny mpiasa dia mahomby amin'ny fiteny 6 (anisan'izany ny Anglisy sy Rosiana).
Tsara be ilay toerana - fahitana ny ala, terrasika hanandrana, karazana zavamaniry eo an-toerana, azonao atao ny mifankazatra amin'ny fizotran'ny kafe, ary mifankahalala amin'ilay "mpamokatra" lehibe an'ny fitrandrahana an'i Liuvak - biby malemy paika.
Luwak dia mpamokatra kafe.
Ny fanandrana kafe sy zava-pisotro hafa dia miseho eo amin'ny terrasto an-kalamanjana misy latabatra lava. Ary aorian'ny fanandramana, ny mpitsidika dia asaina ho tonga ao amin'ny magazay mba hividy zavatra avy amin'ny zava-pisotro ankafiziny. Ankoatry ny kakaô, kafe sy dite, dia mivarotra sôkôla, zava-manitra, voankazo, paraky, ary koa sary hosodoko sy fahatsiarovana hafa.
Eto koa ianao dia afaka mividy ilay karazana kafe «kopi Luwak» malaza sy lafo indrindra.
Marihina fa ny vidin'ny fivarotana eo an-toerana dia farafahakeliny farafahakeliny ho an'ny mpivarotra mahazatra any Bali.
Ao amin'ny faritry ny fambolena dia misy mavomavo mahavariana, izay ahafahanao mitaingina sy maka sary tena tsara amin'ny sarany.
Ny mpizahatany dia tonga ao amin'io toeram-pambolena io indrindra amin'ny ampahany amin'ny fitsangatsanganana vondrona maro manerana ny nosy.
Saika eo afovoan'i Bali no misy azy. Amin'ny arabe avy any Ubud mankany amin'ny farihin'i Bratan. Raha avy any Ubud amin'ny lalana tsara ianao dia avy hatrany io fambolena io aorian'ny handalanao Gunung Kawi
adiresy: Fambolena kafe Satri, Jl. Raya Penelokan 81172, Petung, Bali, Indonezia
mandrindra: -8.405445, 115.322925
Fambolena kafe Satria amin'ny sari-tanin'i Bali
Manandrana kafe sy zava-pisotro hafa - maimaim-poana
Fitsidihana tarihina - maimaim-poana
Manandrana kafe Luwak - 5 usd
Alatsinainy - 9.00 - 18.00
Talata - 9.00 - 18.00
Alarobia - 9.00 - 18.00
Alakamisy - 9.00 - 18.00
Zoma - 9.00 - 18.00
Sabotsy - 9.00 - 18.00
Alahady - 9.00 - 18.00
Luwak kafe amin'ny ho avy. Avy eo ambanin'ny luwak ihany.
Fanendasana kafe amin'ny tanana
Fanandramana zava-pisotro isan-karazany
Amoron-dranomasina 10 be indrindra any Filipina
rem / fanehoan-kevitra amoron-dranomasina 10 tsara indrindra any Filipina tsy misy
Faritra tsara tarehy 8 eto Filipina
rem / fanehoan-kevitra amin'ny faritra mahafinaritra indrindra 8 any Filipina tsy misy
Tanàna kely 15 mahafinaritra indrindra any Aostralia
rem / fanehoan-kevitra amin'ireo tanàna kely 15 tsara tarehy any Australia tsy misy
Dia fitsangatsanganana antoandro 6 tsara indrindra avy any Melbourne Aostralia
rem / fanehoan-kevitra amin'ny fitsangatsanganana an-tampon'ny 6 andro avy any Melbourne. Aostralia tsy misy
Marika malaza 12 any Perth, Aostralia
rem / fanehoan-kevitra Miakatra amin'ireo toerana manintona 12 malaza any Perth, Aostralia tsy misy
Ny zavatra 12 tsara indrindra hatao any Brisbane, australia
rem / fanehoan-kevitra Zavatra 12 tsara hatao any Brisbane, Aostralia tsy misy
5 1 fifidianana
Tany amin'ny tanimboly iray mahaliana iray izahay, raha natao ny fitadidiana, dia nantsoina hoe Kopi Bali Pulina. Toa tsara kokoa ny zava-drehetra tao, farafaharatsiny momba ny fanandramana. Tsara ny toerana.
Nisy ihany koa ny fitsidihana maimaim-poana. Ary maimaim-poana ny fanandramana, afa-tsy ny kafe luwak, raha misy te hanandrana.
Tsy hiteny amin'ny magazay aho fa nisy io, saingy tsy nividy zavatra teo izahay, satria hita fa avo kokoa noho ny vidin'ny magazay ny vidin'entana - mbola toerana fitsangantsanganana io.
Nahaliana ilay fitsangantsanganana, zavatra maro no naneho ny fomba fitomboan'ny zava-maniry sy ny natiora. Eny, any amin'ireo tranomaizina ihany koa ireo biby mampalahelo ireo.
Misaotra amin'ny tendrony. Eny. Mahazatra an'ity voly ity. Ny hotely dia miorina eo amin'ny manodidina an'i Ubud akaikin'ny tanimbary Tegallalang. Ireo zaridaina ireo koa dia hojerena ato ho ato.
Hanampy aho fa misy ihany koa ny ony eo amin'ny lavaka mangitsokitsoka, ary toerana mahaliana amin'ny fakana sary. Ary amin'ny ankapobeny dia misy cafe eo an-toerana ho an'ny fanandramana amin'ny lafiny iray amin'ny lohasaha midadasika feno ala mikitroka - toerana tena tsara.
Ary manolotra gilasy tena matsiro izy ireo amin'ny voanio antsasaky ny sasany.
Manontany tena aho raha izy ireo mihitsy ve no misotro an'ity kafe Luwak ity? Izaho manokana dia tsy manana faniriana hanandrana azy akory. Tsy azoko an-tsaina hoe firy no tokony hohaninao hisotro kafe, izay efa lanin'ny olona talohananao, mba hametrahana azy malefaka….
Dernière modification il ya 1 ans par Bot-Jagwar
izy ireo ihany, araka ny fandinihako, dia aleony misotro ny kafe any an-toerana mora indrindra. Mahery sy manitra ny tsirony.
Ary tsy misy dikany ny fandevenana ny kafe avy any ambanin'ny Luwak.
Tsy dia mitsiriritra loatra ny exotika izy ireo izay tsy misy dikany azo ampiharina ... indrindra amin'ny vola be.
Nusa Dua Beach any Bali. Indonezia
20.10.2020 / fanehoan-kevitra eo amin'ny Beach Nusa Dua any Bali. Indonezia tsy misy
Kuta Beach any Bali. Indonezia
19.10.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Kuta Beach any Bali. Indonezia tsy misy
Keramas amoron-dranomasina any Bali. Indonezia
19.10.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny morontsiraka Keramas any Bali. Indonezia tsy misy